Sida loo tirto faylasha, Options System, Apps on iPhone
Casharrada u Sida loo Delete SMS, Photos, Apps, Options System oo kale Files on iPhone
2.2 Lifaaqa Delete
3.1 Camera Delete Roll
4.1 Songs Delete
4.4 Delete buugaag
7. Delete Xulashada System
7.2 Password Delete
7.3 Xadidaada Delete
8. Delete kale Files
8.1 Mail Delete
8.2 farriinta codka Delete
8.3 Calendar Delete
8.7 Browser Delete Taariikhda
8.8 Kukiyada Browser Delete
8.9 Delete kaabta macruufka
Hordhac u ah Sida loo Delete Items on iPhone
Waa caadi in dadka isticmaala iPhone in ay tirtirto waxyaabaha ka iPhone, sidoo kale in ay lacag la'aan ah ilaa meel ama kaliya saarto wax aan loo baahnayn. Si kastaba ha ahaatee, waxay u muuqataa in ay tahay inta badan ka sahlan si loo soo dajiyo barnaamijyadooda, diro, sawirro loo qaado, ciyaaro iyo heeso badan videos delete barnaamijyadooda, fariimaha, sawiro, videos, songs, files kale oo kooxdan maylka file on iPhone. Foruntately, by faqri dhowr ilbiriqsi on tutorial kasta ee qodobkan, waxaad tirtiri kartaa wax aad rabto. Maqaalkani waxa uu ka mid ah dhowr qaybood, fadlan riix bar kooxda navigation bidix si aad u hesho macluumaadka aad rabto in aad:
Delete iPhone Messages: tuubada Settings> General> Isticmaalka, waxaad arki kartaa in farriimo ayaa aad kaydinta iPhone cunay. Ha welwelin! Riix Delete SMS ama Delete ku lifaaqan Message ee bar navigation bidix si ay boos sii daayo.
Delete iPhone Photos: haddii aad iPhone Camera Roll waxaa weji gabax la sawiro, ama nuqul albums sawir jiraan on your iPhone, xal duwan ayaa lagu bilaabaa in qayb ka mid ah baahisey in ay kuu sheegaan sida loo sameeyo si fudud.
Delete music iyo videos on iPhone: yaabaa in aad tirtirto heeso iyo videos si lacag la'aan ah ilaa iyo meelaha. Si kastaba ha ahaatee, waxa dhacaya oo dhan wakhtigii la tirtiro heesaha iyo videos soo laabto on iPhone mar kale iyo mar kale. Si loo xaliyo dhibaatada, tahay mid aad u badan tahay si aad u dalbato habka ku xusan qodobkan aad.
Delete iPhone Apps: sidoo kale u tirtiro barnaamijyadooda ku iPhone, ama ay ka saareen xogta app iyadoo app, waxaad ka heli kartaa hababka ugu fiican oo ugu fudud in this article.
Delete Options iPhone System, habayn, xayiraad, VPN, mail, jadwalka taariikhda, bookmark, iwm sameeyo waxaa halkii ay noo fududahay in ay sii noo gaarka ah ama isticmaalaysa internetka. Si kastaba ha ahaatee, mararka qaarkood aan laga yaabaa in u baahan tahay in wax laga beddelo waxoogaa yar. Xaaladdan oo kale, waa in aad taqaan sida loo beddelo goobaha baahisey.
Dhib u Items takhalusid ka iPhone
Su'aasha # 1: Waxaan isku dayay in la furo sugitaanka icon mugdi ah, laakiin waxa ma shaqeeyaan. Oo anna waxaan sidoo kale xitaa aan iyaga tirtiri kartaa. Waxaan isku dayay in uu u xaliyo dhibka ay howleheedii aan iPhone oo ma shaqeyn aad. Marka i qaban icon si uu u sameeyo iyaga u oynayo, ma jiraan X ee geeska kore ee midigta. Sidee i xaliyo dhibaatadan?
Jawaab: Haddii walxood app qaar ka mid ah oo ku saabsan iPhone waa mugdi iyo sugitaanka, waxaa loola jeedaa in barnaamijyadooda kuwan waxaa u fudud in background.You ku riixi kartaa bar navigation bidix Delete App Leyliga si ay u arkaan xalka.
Su'aasha # 2: Maxaa ku dhacaya app xogta markii aan ku meel gaar ah u tirtirto app ka iPhone? Waxaan doonayaa inaan sii xogta ay dhacdo in baahida mustaqbalka.
Jawaab: kulan Qaar ka mid ah waxay u baahan tahay in aad sameysato xisaab shakhsi, taas oo loo isticmaali doono si loo badbaadiyo macluumaadka kulanka gaarka ah daruurta ku. Oo markii aad dib app ku saabsan iPhone iyo gasho la xisaabtaada, aad dib ugu heli karaan xogta. Si kastaba ha ahaatee, xogta app qaar ka mid ah ee aan ku badbaadi oo daruur. Waa in aad samayn gurmad ah gacanta. Hubi faahfaahinta adigoo gujinaya ka bar navigation bidix: Delete Apps on iPhone
Su'aasha # 3: Waxaa jira 2 albums sawir nuqul on my iPhone. Ma aan arki karin wax doorasho Delete in meesha laga saaro mid ka mid ah ka iPhone. Fikrad kasta?
Jawaab: albums sawir nuqul yihiin synced in aad iPhone by Lugood. Waxaa jira dhowr siyaabood oo aad tirtirto nuqul ama aan la rabin sawirada iyo sawiro ku Photo Library. Hubi xalka adigoo gujinaya ka bar navigation bidix: Delete Photo Warsame Qaasaali iyo Delete Photo Library .
Sida loo Delete fariin qoraal ah oo ku saabsan iPhone
Su'aasha # 1: ma haysto meel ku filan on my iPhone, sidaa daraadeed waxa aan u oggolaanayn inay ii sameeyaan gurmad ah. Farriimaha qoraalka aad u badan waxaa ka mid ah qaaday.
Jawaab: in sida ay u shaqayso. Si aad u hubiso in ay jirto meel ku filan sameeyo, waa in aad tirtirto fariimaha qoraalka ah ka iPhone si joogto ah. Dabcan, ka sokow la tirtiro diinta oo dhan, waxaad weli u sii heli karaa fariimo hal muhiim ah. Fiiri sida ay u tirtirto fariin qoraal ah ka iPhone .
Su'aasha # 2: Waxaan tirtiray fariimaha qoraalka ah qaar ka mid ah on my iPhone. Si kastaba ha ahaatee, dhawaan waxaan ogaaday diirada raadinta ka heli kartaa fariimaha qoraalka ah la tirtiro. Farriimaha qoraalka ma dhab ahaantii aad tirtiray oo dhan. Sidee in ay tirtirto fariimaha qoraalka ah ee iPhone si joogto ah?
Jawaab: Waa run in ka dib markii aad tirtirto fariimaha SMS text on iPhone, fariimaha qoraalka ah tirtiray ma dhab ahaantii tageen oo dhan. Waxaad ka heli kartaa goobidda iyo awoodin in ay tahay in aad iyaga ka soo kabsado aad iPhone . Haddii aad rabto in aad si joogto ah u tirtirto SMS ka iPhone, waxaad isku daydaa inaad Wondershare SafeEraser, kaas oo bixiya 3 heerarka in ay tirtirto xog ku saabsan iPhone. Ka dib waxaa la isticmaalayo, fariin qoraal ah, kuwaas oo baabi'i doontaa weligood. Fiiri sida ay u tirtirto SMS ka iPhone si joogto ah .
Ka iPhone Delete SMS joogto ah
Tallaabada 1. Tubada Messages app on iPhone. Guji Edit , mari badan fariin ka xaq u leeyahay inuu ka tegey, oo guji Delete .
Tallaabada 2. Download, rakibi oo ay maamulaan Wondershare SafeEraser on your computer. Connect aad iPhone la your computer via cable USB ah.
Tallaabada 3. Dooro masixi tirtiray faylasha iyo heerka ammaanka in ay tirtirto files ee Wondershare SafeEraser. Sawirka ee files tirtiray aad iPhone.
Tallaabada 4. Hubi Messages iyo iMessages oo guji Xaqiiji in ay tirtirto SMS ka iPhone si joogto ah.
Sida loo Delete Message Text ka iPhone
Delete Sheekeysiga oo dhan
Tubada app Messages ku saabsan gurigaaga screen iPhone. In macruufka 7 ama ka dib, tuubada Edit doorasho ee bidixda xagga kore. Tubada ee goobada cas oo wax yar dhinaca bidix ee diinta ah iyo tubbada Delete doorasho dhinaca midig. In macruufka 6 ama ka hor, ka heli diinta aad rabto in aad tirtirto, weerar dadban ku bidix ilaa midig iyo tubbada Delete doorasho.
Delete fariimaha qoraalka Single gudahood beddelida
Tubada app fariimaha ku qoran iPhone. Raadi iyo furo wada hadal gudahood oo aad rabto in aad tirtirto SMS. In macruufka 7 ama ka dib, ka jaftaa iyo qabso fariin ilaa pop-up ka muuqan. Tubada More . In macruufka 6 ama ka hooseeya, tuubada Edit button Midigta sare. Ka dibna hubi fariimaha qoraalka ah hal la rabin ee xunbo wareegga dhinaca bidix ee fariin qoraal kasta oo ka jaftaa bin qashinka hoose si ay u tirtirto ka iPhone.
Sida loo Delete Lifaaq fariin qoraal ah oo ku saabsan iPhone
Su'aasha # 1: markii aan si Settings> General> Isticmaalka tago, waxaan igu arkaysaan inaan leeyahay in ka badan 3GB farriimaha. Waxaan mar walba tirtirto fariimaha ka iPhone, ma jiri karaan farriimo badan oo qoraal ah. My saaxiib ii sheegay in ay ahayd fariin ku lifaaqan in qabsadeen meesha bannaan ee. Sidee baan u tirtiri kartaa farriin qoraal ah ku lifaaqan tan iyo markii aan xitaa ma garanayo halka ay ka yimaadeen?
Jawaab: waa dhibaato caadi ah in ku dhowaad dhammaan dadka isticmaala iPhone la kulmi karo. Qaar ka mid ah dadka isticmaala ay sheegayaan in ay la tirtiro fariimaha qoraalka ah oo dhan oo keliya si aad u ogaato in fariimaha qoraalka ah ee weli mashquulin badan meel 2GB. Si aad u tirtirto ku lifaaqan farriin qoraal ah, waa inaad raacdid talaabooyinkan hoos ku qoran:
Tallaabada 1. Isku aad iPhone la Wi-Fi. Tubada Settings> iCloud , saxiixo in la ID Apple aad, ka jaftaa Kaydinta & Backu p si ay awood gurmad iCloud ee doorasho. Ha ogolaan in ay kaabta Hadda si ON (marka meesha badhanka waa ku cagaar).
Tallaabada 2. Tag Settings> iCloud , ka heli iyo demi Documents & Data . Tubada Settings> iCloud> Kaydinta & kaabta . Daar ee kaabta Hadda .
Tallaabada 3. Tubada Settings> General> celi iyo masixi content oo dhan iyo goobaha . In ka Kaaliyaha Setup , sii soco ilaa Calan qalab aad . Tubada Soo Celinta ka gurmad ah . Dul Dooro gurmad , markaas dooran gurmad ugu dambeeyay iCloud oo aad sameeyey Tallaabada 2.
Sida loo Delete Messages iMessage iyo Lifaaq
The "Documents & Data" ayaa bararsan 4.7GB aan iPhone, iyo waxa ay dhan sababta oo ah iMessage (ama ugu yaraan boqolaal ka mid ah sawirrada ku jira threads gudahood. Ma jiraa si aan badbaadin karo wada hadalka kuwaas laakiin iyaga xoqin sawirada iyaga gudahood ? - Sophie
Marka ay dhacdo in user ee kor ku xusan, xalka waa quruxsan fudud. Just raac tallaabooyinka hoose si aad u tirtirto fariin aan la rabin oo ku lifaaqan ee iMessage.
Tallaabada 1. Riix icon Fariimaha ku saabsan iPhone u muujiyo oo dhan diinta ku saabsan iPhone.
Tallaabada 2. Delete fariimaha iMessage iyo lifaaqyada fariin: Si aad u tirtirto diinta ka dhan, waa in aad riix Edit button ee bidixda xagga kore. Markaas riix goobo yar oo cas ee dhanka bidix ee diinta kasta si ay awood ugu Delete doorasho on xaq. Riix Delete si meesha looga saaro wadahadalka oo dhan.
Si aad u tirtirto qayb ka mid ah wada hadal ama iMessage lifaaqa ah, guji wada hadal. Markaas mid fariin ilaa pop-up muuqataa. Tubada More iyo ka jaftaa goobo yar bidixda si aad u hubiso fariin aan loo baahnayn iyo lifaaqyada iMessage. Riix bin Trash in ay tirtirto fariimaha iMessage iyo lifaaqyada ah.
Ka dib markii la tirtiro waxyaabahaan, waxaad tagi kartaa in meesha laga saaro kooxdan maylka iMessage:
1.Tap Settings> iCloud> Kaydinta & kaabta . Tubada kaabta Hadda in gurmad aad iPhone hore.
2.Tap Settings> iCloud , demi badhanka ee Documents & Data . Tubada Settings> iCloud> Kaydinta & kaabta> kaabta Hadda in gurmad aad iPhone aan waraaqaha gurmad iyo xogta.
3.Tap Settings> General> celi iyo Eraser content oo dhan iyo goobaha . Aad iPhone Calan by siyoodba Soo Celinta ka gurmad ah . Dul Dooro gurmad iyo dooran iCloud gurmad ugu danbeeyay in la soo celiyo aad iPhone.
Su'aal: dhawaan ayaan u siiyey isticmaalaya iPhone. Si kastaba ha ahaatee, marka saaxiib isticmaalo iPhone inuu i diro farriin, waxa ay si toos ah u doortaan iMessage sida aan tiro mobile inkastoo aanan lahayn iPhone ah mar dambe. Ma jiraa hab lagu soo saarayo lambarka telefoonka aan ka Apple ee iMessage database?
Jawaab: Tag My Support Profile iyo gasho Riix. Edit Products iyo X si xaq ah wax soo saarka. Ka dibna riix Unregister .
Sida loo Delete Twitter Posts, Messages Direct iyo Twitter Accounts
Su'aasha # 1: waan ogahay in iyadoo la tirtirayo taariikhda Message Direct in-jeedo tirtiri doonaa fariin ku qaata mailkooda ka Message Direct. Si kastaba ha ahaatee, waxaan ogaaday in this ka shaqeeya oo keliya computer, laakiin aan ku iPhone. Waxaan isku dayay in ay tirtirto fariin DM on iPhone, laakiin fariimaha kuwaas oo weli waxaa markii aan qortey la via computer.
Jawaab: haa, waana sida twitter ka shaqeeya. Si aad u tirtirto Messages Direct ee mailkooda qaata DM, waxaad ka gali kartaa in aad twitter iyo tirtirto DM kombiyuutarka la adeegsanaayo. Si kastaba ha ahaatee, ma shaqeeyaan Twitter app on iPhone, taas oo macnaheedu yahay haddii aad tirtirto DR on iPhone Twitter app mailkooda, kaliya waxaad ka kaxeeyo aad iPhone, laakiin ay weli ka jiraan.
Sida loo Delete Message Direct ka Twitter app on iPhone
Tallaabada 1. Tubada Twitter app on iPhone si ay u abuurtaan.
Tallaabada 2. Qabo fariin ama diinta aad rabto in aad tirtirto labaad ah.
Tallaabada 3. Tubada Delete ama Delete wada hadalka
Su'aasha # 2: Sida loo tirtiri post dhigay on twitter on iPhone?
Jawaab: si uu u bilaabi jaftaa icon Twitter ku saabsan iPhone. Tag Menu iyo Profile tuubada. Raadi iyo Tweet aad rabto in aad tirtirto ka jaftaa. Tubada qashinka astaan ​​wax karaa hoose ee Tweet iyo fariin arbushin doonaa iyadoo ay xulashada si aad u joojiso. Tubada Delete Tweet.
Su'aasha # 3: Sida loo tirtiri account aan twitter isticmaalaya app twitter iPhone?
Jawaab: si cad u noqon, Twitter ma ogola in aad si buuxda aad xisaabta Twitter tirtirto ka iPhone. Waxaad kaliya account ka saari kara ka iPhone oo tirtirto si joogto ah iyada oo your computer. Si aad barkinta aad xisaabta Twitter, fadlan booqo Twitter Support Center >>. tallaabooyinka Hoos waxaa ku qoran sida ay u tirtirto Twitter-ka ku iPhone.
Tallaabada 1. Tubada Settings iyo hoos si aad u hesho Twitter. Tubada on Twitter iyo ka dib ka jaftaa on your name Twitter.
Tallaabada 2. Tubada Delete Account hoose. In kor pop ah, xaqiijin tirtirka adiga oo riixaya Account tirtirto .
Talaabooyinka in ay tirtirto Facebook App mailkooda Message on iPhone:
Dadka qaar waxa ay ku dooneysaa in ay tirtirto sida farriimaha mailkooda on Facebook iPhone App. Dhab ahaantii, app iPhone Facebook kuu ogolaanaya in aad si aad u eegto aad Facebook mailkooda fariimaha oo dhan, laakiin ma aan oggolaan inaad si joogto ah iyaga tirtirto nidaamka Facebook ee. Haddii aad dooneyso in aad tirtirto Farriinta Facebook si joogto ah, waa inaad ka dib ku sameeyaa iyadoo la isticmaalayo your computer. Hoos waxaa ku qoran talaabooyinka in ay tirtirto fariimaha mailkooda on app iPhone Facebook:
Tallaabada 1. Tubada app Facebook ku icon aad iPhone si ay u abuurtaan.
Tallaabada 2. Tubada icon Message on sare ee shaashadda iyo diinta aad fariimaha aad rabto in aad tirtirto waa ka jaftaa.
Tallaabada 3. Tubada iyo hay fartaada on fariin aad rabto inaad tirtirto. In ka-up pop, tuubada Delete iyo tuubada Delete on menu kacdo.
Sida loo Delete Whatsapp Chat Taariikhda
Waa mid aad u fudud in ay tirtirto fariimo WhatsApp ama ka iPhone lagu sheekeysto taariikhda. Waxaad tirtiri kartaa fariimaha shaqsi, coversations, ama chat taariikhda oo dhan ay raacaan talaabooyinka soo socda:
Delete fariin hal wada hadal ah:
Tallaabada 1. Open WhatsApp aad iPhone iyo in la hubiyo Wi-fi xiran yahay. Fur qaab beddelidda oo ka mid ah farriinta aad u socoto in ay tirtirto.
Tallaabada 2. Click Edit ku saabsan sare oo fariin aad rabto in aad tirtirto. Ka dib markii ay fariin la hubiyaa, guji bin qashinka meesha ugu hooseysa.
Delete wada hadal ah oo dhan:
Tallaabada 1. Tag CHAT qaybta. Ha ogolaan in chat ka xaq u leeyahay inuu ka tagay.
Tallaabada 2. Marka badhanka Delete u muuqata, waxaa ka jaftaa.
Fiiro gaar ah: haddii aad codsato sidan in ay tirtirto chat koox, aad waxaa laga saari doonaa kooxda. Si looga fogaado musiibo ah, isku day in ay nadiifiso dhammaan taariikhda chat by Raac tallaabooyinka hoose.
Clear oo dhan taariikhda chat WhatsApp on iPhone:
Tallaabada 1. Daahfurka WhatsApp oo taga si Settings. Scroll ugu hooseysa.
Tallaabada 2. Tubada Clear All Conversations .
Kor ku xusan waa sida in ay tirtirto taariikhda chat WhatsApp iyo wada hadalka ka iPhone. Haddii aad ula kac ahayn tirtirto wada hadalka ama taariikhda chat dhan ka iPhone oo doonaya in ay dib u soo waxaad isku dayi kartaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka inuu ka soo kabsado tirtiray WhatsApp lagu sheekeysto taariikhda. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka. Haddii aad rabto in aad tirtirto permanenlty WhatsApp Chat History, guji halkan .
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray WhatsApp Chat Taariikhda
Tallaabada 1. Ku rakib Wondershare Dr.Fone ee macruufka
Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer. Waxay u ordaan oo xiriiriyaan iPhone in kombiyuutarka. Waxaad arki doonaa suuqa kala hoose haddii aad isticmaasho iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5 ama iPhone 4s.
Fiiro gaar ah: Suuqa ayaa u iPhone 4 ama iPhone 3GS waa wax yar oo ka duwan kuwa u iPhone 5S, iPhone 5C, iPhone 5 ama iPhone 4s. Wax macno ah ma. Waa inaad samaysaan sidaan waxa uu furmo suuqa kuu sheegayaa in ay sameeyaan
Tallaabada 2. Scan iPhone taariikh chat WhatsApp
Wixii iPhone 5S / 5C / 5 / 4s dadka isticmaala, waxaad si toos ah riixi kartaa batoonka Start Scan ku furmo suuqa ugu weyn barnaamijka. Markaas barnaamijka la bilaabaa aad ka baareyso iPhone.
Wixii iPhone 4 iyo iPhone users 3GS, waxaad u baahan tahay in la raaco hab hoose si ay u helaan hab iskaanka qalab ee si aad u iskaan:
1. Guji button Start ku saabsan suuqa kala dib markii ay isku xidha aad iPhone.
2. Isla markiiba ka jaftaa Home iyo Power badhamada aad iPhone 10 ilbiriqsi.
3. Marka 10 seconds maray, waxaad sii daayo karaa batoonka, laakiin weli ka jaftaa button Home for kale 15 ilbiriqsi, ilaa aad u sheegay in aad si guul leh ku soo gashay hab iskaanka ah.
Fiiro gaar ah: Haddii aad xoojiyaa aad iPhone in Lugood ama iCloud ka hor aad tirtirto WhatsApp lagu sheekeysto taariikhda, waxa kale oo aad samayn kartaa WhatsApp ee lagu sheekeysto kabashada taariikhda ay u suuro- soo kabsado Lugood ee kaabta File ama ka soo kabsado iCloud File kaabta .
Tallaabada 3. Kulanka Xiisaha Leh ceshan taariikhda chat WhatsApp aad iPhone
Waqtiga sawiridda, waxaad bilaabi kartaa in ay ku eegaan xogta laga helay natiijada scan. Gujinaya WhatsApp dhinaca bidix ee suuqa, waxaad ku eegaan karo oo dhan ka helay WhatsApp lagu sheekeysto record halkan, oo ay ku jiraan waxyaabaha chat, magacyada, lambarada telefoonada iyo lifaaqyada. Dooro kuwa aad rabto in aad soo kabsado iyo iyaga sax. Markaas riix Ladnaansho iyaga badbaadiya on your computer.
Sida loo Delete WhatsApp Chat History joogto ah
Su'aal: Sidee si joogto ah u tirtirto taariikhda chat ku WhatsApp ka iPhone? Ninkeyga waxa uu isku dayaan in ay soo kabsadaan taariikhda CHAT aan on my iPhone. Waxaa jira qaar ka mid ah wada hadalka waxa Ma doonayo in aan isaga si ay u arkaan.
Jawaab: Si joogto ah ka iPhone tirtirto taariikhda chat WhatsApp, waxaad isku daydaa inaad SafeEraser Wondershare . Ka dib markii ay u isticmaaleeysay in ay masixi aad iPhone, software ma ceshan doonaa taariikhda chat WhatsApp ka iPhone, xitaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka. Fiiri sida loo isticmaalo SafeErasfer Wondershare si meesha looga saaro taariikhda chat WhatsApp.
Tallaabada 1. Daahfurka WhatsApp on iPhone, ogaato iyo tirtirto taariikhda chat ugu horeysay.
Tallaabada 2. Download iyo rakibi SafteEraser Wondershare on your computer. Waxay u ordaan oo isticmaali cable ah digital in ay ku xidhmaan aad iPhone la your computer. Waxay muujiyaan doonaa iPhone in ay suuqa kala weyn. Dooro masixi tirtiray faylasha iyo heerka ammaanka ah oo aad jeceshahay.
Tallaabada 3. baarista iPhone oo ka heli taariikhda tirtiray WhatsApp chat. Waxaa Hubi oo guji Xaqiiji in ay tirtirto ka iPhone si joogto ah.
Sida loo Delete iPhone Camera Roll
Waxaan leeyahay ka badan 1,000 sawiro aan iPhone Camera Roll. Waxaan jeclaan lahaa in aad tirtirto oo dhan sawirada ku giringiriya Camera ah. Sidee baan u tirtirto sawiro badan ka Camera Roll?
Asal Waxaa jira 3 siyaabood in ay tirtirto Photos ee iPhone Camera Roll. Haddii aad rabto in aad tirtirto sawiro ka iPhone Camera Roll permanetly, waxaad isku daydaa inaad Xalka 1. Solution 2 iyo 3 Xalka sidoo kale u sheeg sida ay u tirtirto sawiro ka iPhone Camera Roll. Si kastaba ha ahaatee, waxay uun ku sameeyo sawiro, kuwaas oo aan la arki karin. Kuwani delete photos meel ka jiraan on your iPhone oo la karaan kabsaday la qalab, sida Wondershare Dr.Fone ee macruufka . Dooro habka ah in ay xaq kuu:
Xalka 1: Delete iPhone Camera Roll Photos joogto ah. Solution 2: Delete Photos ka iPhone Camera Roll on Computer Xalka 3: Delete Photos ka iPhone Camera Roll toos ah
Xalka 1. Delete iPhone Camera Roll Photos Permanetly
Iyadoo la tirtiro sawiro ka iPhone Camera Roll, dad badan oo aadan hubin in sawiro kuwan waxaa si joogto ah la tirtiro ama aan. Si aad ugu sheegto runta, ma ahan. Waxaa la tirtiro photos qarsoon yihiin meel aad iPhone oo aad soo kaban karto iyaga. Haddii aad ku socoto inay iska iibiso ama siiso iPhone qof, waxaad isticmaali kartaa SafeEraser Wondershare in ay si joogto ah u tirtirto photos on iPhone. Hoos waxaa ku qoran talaabooyinka soo socda:
Tallaabada 1. Download iyo rakibi SafeEraser Wondershare on your computer. Waxaa si buuxda la jaan qaada Windows 8/7 / Vista / XP. Ka dib markaas, waxa maamula.
Muhiim: software Tani waxay si joogto ah u tirtirto doonaa dhammaan macluumaadka iyo goobaha aad iPhone, wax fursad ah soo kabashada. Fadlan gurmad xog muhiim ah ka hor inta aanad bilaabin. Tahay soo jeediyay in aad isticmaasho ah dhinac saddexaad gurmad qalab sida Wondershare TunesGo . Lugood iyo iCloud hana u oggolaan in aad ku soo celin eegista xogta aad iPhone. Taasi waa in la yidhaahdo, ka photos tirtirayaa in mar kale dib loo soo celiyo si aad iPhone haddii aad doorato sidan.
Tallaabada 2. Isku aad iPhone la computer dhex cable USB ah. Markaas suuqa kala SafeEraser, dooro masixi dhammaan xogta ku saabsan qalab .
Tallaabada 3. Ka hor inta aadan riix badhanka Start, dooran heerka takhalusid xogta: sare, dhexe ama Low. Ama waxaad ku jiri kartaa hal default ah (dhexe). Dhab ahaantii, waa mid ka mid ah lagu taliyay. Markaas riix badhanka Start ay ku bilowdo in la tirtiro sawiro aad iPhone hadda.
Solution2: Delete Photos ka iPhone Camera Roll on Computer
Delete iPhone Camera Roll on PC Windows
Tallaabada 1. Isku aad iPhone aad Windows PC via cable USB ah.
Tallaabada 2. Open "My Computer" oo aad arki doonaa in Windows PC mid Qaybta Labo Dhadig iPhone sida drive dibadda adag.
Tallaabada 3. Riix in la furo gal u ah aad iPhone oo heli photos ee iPhone Camera Roll. Dooro photos aan la rabin in iPhone Camera Roll oo guji Delete muhiim ah inuu iyaga ka dhaqaajiyo.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone aad Mac via cable USB ah;
Ciidamada Image Tallaabada 2. Daahfurka, xiisaha leh, ama iPhoto. Haddii aanad garanayn meesha laga soo codsaday waa, isticmaali Barta xaq u sareysa si ay u baadhaan, waayo.
Tallaabada 3. By default, codsiga lagu ogaan doonaa iPhone iyo muujiyaan oo dhan photos ee iPhone Camera Roll. Dooro kuwa aan la rabin oo guji icon ku tirtirto si ay u tirtirto ama iyaga dajiyaan aad Mac. Marka aad doorato Import, waxaa jiri doona fariin weydiinaya in aad tirtirto oo dhan photos soo xulay ama ma ka dib markii iyaga soo degida in computer.
Solution3: ka iPhone Camera Roll Delete Photos toos ah
Tallaabada 1. Tubada Photos icon aad iPhone;
Tallaabada 2. Click Qaasaali on hoose ee aad suuqa kala iPhone. Laga soo bilaabo halkan, waxaad ka arki kartaa Roll Camera.
Tallaabada 3. Riix Camera Roll inuu wada muujiyo dhammaanba sawiro. Dooro mid ka mid ah sawir oo ka jaftaa bin qashinka on xaq u hooseysa.
Talooyin: Haddii aad iPhone waddaa in macruufka 6 iyo qoraalkii hore, waxaad isticmaali karaan Settings> General> Isticmaalka . Laga soo bilaabo halkan, jaftaa Photos oo wada tirtirto.
Sida loo Delete Photo Qaasaali on iPhone
Su'aasha # 1: haatan iPhone ahaa gjærceler ka phone jir. Xaaladdan oo kale, sawiro dadkaygii waxaa loo labalaabka. Sidee baan u tirtiri kartaa album iPhone Photos? Waxaan isku dayay nadiifinta shaqsi sawirada laakiin hesho fursada u lahayn in ay oggolaadaan in ay tirtirto ka. Waxaan sidoo kale u arkaan jid ay tirtirto album dhan.
Jawaab: Haddii sawirada aad rabto in aad tirtirto yihiin synced si iPhone by Lugood, ma jiraan wax doorasho Delete aad iPhone. Waxaad isku dayi kartaa TunesGo Wondershare ama Wondershare TunesGo (Mac) si ay u tirtirto iPhone sawirada si hufan ama dhigay Lugood ma syncing aad iPhone .
Su'aasha # 2: Waxaan la qabtay qaar ka mid ah sawirada la iPhone. Si aad u maareyn, waxaan iyaga ku kala sooci la albums sawir. Hadda waxaan doonayaa in ay tirtirto albums sawir kuwaas, bal sidee baan u samayn karaa?
Jawaab: Haddii aad abuuray albums sawirka gacanta ku saabsan iPhone, sidoo kale iyaga waxaad tirtiri kartaa ka iPhone: Tubada Photos icon aad iPhone> tuubada Edit. Marka goobada cas oo u muuqata dhinaca bidix ee album sawir, waxaa guji. Ka dibna waxaad arki kartaa fursad u tirtirto dhanka midig.
Delete Photo Qaasaali la TunesGo Wondershare
Tallaabada 1. Download iyo rakibi Wondershare TunesGo ama Wondershare TunesGo (Mac) on your computer;
Tallaabada 2. Isku aad iPhone la your computer iyada oo aad cable USB iPhone iyo Burcad TunesGo Wondershare.
Tallaabada 3. Riix Photos on geedka buugga bidix. Markaas, xaq guji album sawir aad rabto in aad tirtirto ka. In liiska hoos-hoos u, guji Delete .
Delete Photo Qaasaali by Dejinta Lugood nidaameed
Tallaabada 1. Isku aad iPhone la your computer via aad cable USB iPhone iyo abuurtaan Lugood.
Tallaabada 2. Riix si aad iPhone hoos AALADAHA. Daaqadda midig, guji Photos. Uncheck nidaameed. Marka ilaa pop ah ku weydiinayaa inaad soo saarto ama sii sawiro, guji saar Photos.
Delete Photos ee iPhone Photo Library
Waxaan synced gal ah images in aan iPhone oo soo baxa sida laba fayl in aan iPhone, mid ka mid ah waxaa loo magacaabay Photo Library. Waxaan u tirtiri karaa Photo Library on iPhone? Fadlan caawi.
Photo Library waa meesha aad iPhone si loo badbaadiyo sawirrada aad synced ka your computer. Si aad u tirtirto Photo Library, waxaad leedahay oo keliya labo ikhtiyaar: tirtirto iPhone Photo Library leh qalab-saddexaad ama tirtirto Photo Library on iPhone la Lugood .
Xalka 1: Delete iPhone Photo Library la TunesGo Wondershare
Tallaabada 1. Download iyo rakibi Wondershare TunesGo , tababaraha iPhone ah, on your computer. Waxa maamula.
Tallaabada 2. Isku aad iPhone la your computer dhex cable USB ah.
Tallaabada 3. Riix Photos galeeysid ah. Raadi iyo furan Photo Library . Dooro photos aan loo baahnayn oo guji Delete .
Xalka 2: Delete Photo Library on iPhone la Lugood
Waxaan kor ku soo sheegnay in Photo Library waa meesha iPhone in uu kaydiyo sawirada aad synced via Lugood. Si ka iPhone Delete Photo Library, waa in aad u hagaagsan dhigay Lugood.
Tallaabada 1. Lugood Daahfurka guji View > Show galeeysid .
Tallaabada 2. Isku aad iPhone la computer via iPhone USB cable aad.
Tallaabada 3. Guji aad iPhone in qalab deegaanka. Dhinaca midig, guji Photos. Uncheck fursad u nidaameed. Markaas ee pop-up cusub, guji saar Photos .
Talaabooyinka Sahlan ee Delete Songs on iPhone Gacanta
Tallaabada 1. Click Music icon ee iPhone Home shaashadda si ay u abuurtaan.
Sep 2. Songs Click hoose. Dadban u sarreeyey gabaygii, ka xaq u leedahay inaad ka tagay oo guji Delete.
Q & A waayo Songs takhalusid ka iPhone
Su'aasha # 1: ka dib dayactir, waxa ay u muuqataa sida aan qabo heeso badan oo ku saabsan iPhone badan ayaan filayaa. Inta badan waxay leeyihiin sida calaamad iCloud ah, ii sheegay in ay tahay bixi karo. Waxaan isku dayay in ay tirtirto, lakiin ma sheegi karo. Walba oo soo jeedinaya?
Jawaab: in ay tirtirto, kuwaas oo songs download aad iPhone, waa in aad ku sawirnaa Settings> Music> iyo toggle off Show All Music. Marka aan sidaa yeelno, wax badan oo ka tegi doonaa. Si aad u tirtirto heeso aad soo bixi in aad iPhone, Music furan, mari badan hees aad rabto in aad tirtirto ka xaq u leeyahay inuu ka tegey, oo guji Delete.
Su'aasha # 2: oo bilaash ah ilaa meel iPhone aan, Waxaan tirtiray songs qaar ka mid iPhone-by-ka mid ah. Si kastaba ha ahaatee, markii aan ku xiran my iPhone la computer, heesaha oo dhan soo laabto waxa aan iPhone mar kale. Waxaan doonayaa in la ogaado hadii ay jirto hab kasta oo ay u xaliyaan dhibaatada.
Jawaab: waa hubaal, ka dib markii aad ka iPhone tirtirto songs gacanta, waa in aad mar dambe ma xidhi aad iPhone la your computer. Haddii xiran, Lugood u hagaagsan doonaa heeso aad mar kale la tirtiro si aad iPhone. Ma jirto doorasho la xusho songs shaqsi ee Lugood si hagaagsan in aad iPhone. Haddii aad hesho waa adag tahay in aad iPhone aan shaqo ku lahayn your computer, waxaad isku dayi kartaa:
Tallaabada 1. Uncheck nidaameed Music in Lugood
Connect aad iPhone la your computer. Burcad Lugood iyo uncheck ee doorasho nidaameed Music in Lugood. A pop-up ayaa kuu sheegi doona in heesaha oo dhan iyo playlists jira on iPhone laga saari doono. Riix saar oo raganimo Lugood.
Download TunesGo Wondershare ama Wondershare TunesGo (Mac) si loo soo dajiyo on your computer. By default, software lagu ogaan doonaa iPhone oo ay muujiyaan in uusan xirmin suuqa ugu weyn.
Tallaabada 3. Import doonayay heeso aad iPhone
Riix Music galeeysid bidix. Ka dibna riix-xagalka ah ee Add dusheeda. Dooro dar dar File ama Folder xitaa your computer songs aad u baahan tahay iyo iyaga dajiyaan in aad iPhone.
Sida loo Delete Playlists ka iPhone
Tubada Music app icon ku iPhone> Tubada Playlists hoose ee suuqa kala> Kaadhkaaga ka badan playlist ka xaq u leeyahay inuu ka tagay> Riix Delete .
Su'aasha # 1: sida in ay tirtirto heeso ka playlist in app music on iPhone?
Jawaab: tuubada Music app icon> tuubada Playlists hoose ee suuqa kala> playlist ah oo ay ku jiraan heeso aad rabto in aad tirtirto> heli song iyo mari ka xaq u leeyahay inuu ka tagay> tuubada ka jaftaa saar .
Su'aasha # 2: waxa ay u muuqataa afganbigii ay ka xaq u leeyahay inuu ka tagay on iPhone mar walba ma inkastoo shaqeeyaan. Qaar ka mid ah playlists aan, Anigu iyaga ma soo si toos ah u tirtiri kartaa ka iPhone.
Jawaab: in ay tirtirto noocan oo kale ah playlists aad iPhone, waa in aad ku xidhi aad iPhone la your computer, oo isku dayaya inay mar kale u hagaagsan aad iPhone la Lugood. Ka hor inta syncing music, waa in aad doortaan in ay u hagaagsan maktabadda music oo dhan, laakiin xulay fanaaniinta, playlists, qaybaha, iwm dibna hubi playlist aad rabto in aad sii aad iPhone oo guji codso .
Sida loo Delete Podcasts on iPhone
Su'aasha # 1: sida in ay tirtirto dhacdooyin Podcast ka iPhone? Waxaan u baahanahay inaan lacag la'aan ah ilaa meel iPhone aan iyadoo la tirtirayo dhacdooyin Podcast jir.
Jawaab: Daah-app Podcasts in Home screen aad iPhone> jaftaa Podcasts My hoose ee shaashadda> podcast ah oo ay ku jiraan dhacdooyin aad u socoto in ay tirtirto> dadban ee guud ahaan horyaalka dhacdo ee ka xaq u leeyahay inuu ka tagay jaftaa> tuubada Delete .
Su'aasha # 2: waxaan tirtiray tiro ka mid ah podcasts on my iPhone oo iyaga aad u tirtirto ka Lugood. Si kastaba ha ahaatee, magacyada podcasts ayaa weli harsan aan iPhone. Waxaan isku dayay wax kasta in ay tirtirto, kuwaas oo horyaal podcast, laakiin ma jiraan wax doorasho tirtirto.
Jawaab: dad badan ka cawdaan in dib marka la tirtiro oo la kansali podcast oo dhan ku iPhone, icon podcast weli. Ok, dhab ahaantii, waxaa jira button Edit taas oo aan si cad loo arki karo on iPhone si aad u soo saarto podcast horyaal / astaanta ah. Tubada app Podcast on iPhone si ay u abuurtaan. Eeg oo dhan horyaal podcast (astaanta) iyo button Store waa bidixda sare? Great. Fartaada shaashadda iyo mari vertical ka kor ilaa hoos. Ka dibna waxaad arki kartaa badhan Edit taas oo waafaqsan Search iyo bandhigay aragtida, waxaa Riix si ay awood fursad u tirtirto.
Sida loo Delete buugaag ku iPhone
Dadka qaar ayaa sheegaya in aad dooneyso in aad tirtirto oo dhan buugaag off ay iPhone, laakiin ma fahmi karaa sida. Dadka qaar ayaa xitaa isku dayay in ay tirtirto buugaag, kuwaas oo in Lugood hore iyo synced iPhone la Lugood dambe. Si kastaba ha ahaatee, waxa aan shaqeyn. Xaaladdan oo kale, waxaa laga yaabaa inaad isku daydo sidan:
Tallaabada 1. Tubada Settings> General> Isticmaalka si aad u hesho app Music ee ku Bakhaarka deegaanka. Haddii aadan arki app Music ah, fadlan guji Show oo dhan Apps .
Tallaabada 2. Tubada Music dibna waxaad riixi kartaa ka Edit button dhinaca sare midig. Riix badhanka Edit iyo dooro buugaag aad dooneyso in aad tirtirto.
Guud ahaan, waa mid aad u fudud in ay tirtirto videos ka iPhone. Waxa kaliya ee aad qaadataa ilbiriqsi yar ee 2 tallaabooyinkan fudud si aad hadafkaaga:
Tallaabada 1. Tubada app Videos ku iPhone inay daabacaan.
Tallaabada 2. Tubada button Edit Midigta sare ee dooro videos in ay tirtirto on iPhone.
Su'aasha # 1: Waxaan leeyahay gal ah in sawiro sida Videos magacaabay taas oo ka kooban dhan videos jir ayaan qaaday ka hor inta u macruufka 7 hagaajinta. Waxaan eegi kartaa waana soo dooratay, laakiin ma tirtiri kartaa videos ka iPhone tan bin qashinka waxaa grayed baxay.
Jawaab: videos jiray Photos aad iPhone aan laga tirtiray inta badan maxaa yeelay waa videos synced ka Lugood aad. Haddii kale, waxaad si fudud iyaga tirtiri kartaa. Si aad u tirtirto noocan oo kale ah videos, kaliya xiriiriyaan iPhone la computer iyo abuurtaan Lugood. Riix si aad iPhone in Lugood iyo riix Photos tab dhanka midig. Uncheck nidaameed Photos . Marka aan sidaa yeelno, ilaa pop ah ka muuqan doona, kuu sheegaysa in dhammaan sawiro aad iPhone laga saari doonaa, guji saar .
Sida loo Delete Movies ka iPhone
Waxaan soo baxeen xusuus on my iPhone oo aad rabto inaad ka saarto filimada, Aniga ayaa saas ku. Waxaan u baahanahay gargaar . -James
Asal ahaan, waxaa jira laba siyaabood oo loo tirtiri filimada ka iPhone: tirtirto filimada si toos ah iPhone iyo isticmaali u hagaagsan Lugood in ay tirtirto filimada ka iPhone.
Delete Movies si toos ah iPhone:
Tallaabada 1. Tubada app Videos ku iPhone inay daabacaan,
Tallaabada 2. Raadi filim aad rabto in aad tirtirto ka iPhone iyo mari horyaalka ka xaq u leedahay inaad ka hadhay,
Tallaabada 3.Click badhanka cas Delete dhankiisa midigta oo ah video ah.
Pro: fudud oo fudud, Con: sidan tirtirtaa kaliya filimada ka iPhone. Markii ugu socda, marka aad u hagaagsan aad iPhone aad Lugood Library, videos la synced doonaa iPhone mar kale haddii aadan bixin ee diiradda waxa lagu synced;
Isku day Lugood in ay tirtirto Movies ka iPhone:
Tallaabada 1. Isku aad iPhone la computer iyo abuurtaan Lugood
Tallaabada 2. Riix si aad iPhone ee AALADAHA deegaanka. Dhinaca midig, guji Movies ,
Tallaabada 3. Haddii aad rabto in aad tirtirto movies oo dhan aad iPhone, waa in aad uncheck nidaameed Movies iyo codsan amarka. In digniin pop-up ee ay ka saareen filimada, dooro saar . Haddii aad u baahan tahay oo kaliya in ay tirtirto aflaam aad iPhone, waxaad eegi kartaa nidaameed Movies dooro filimada aad rabto inaad sii on your iPhone. Riix nidaameed.
Pro: in si ka dhakhso badan in ay tirtirto videos, Con: baahan tahay in aad ku xidhi aad iPhone la computer via cable USB;
Walxood App kaliya ku xayiran on iPhone, waxaa jira jawaab lahayn. Sidee in ay tirtirto calanka u isticmaali on hoose ee shaashadda? Waxaan si double tuubada loo isticmaalo button guriga si ay u tago. Hadda waxay u muuqataa in aysan u shaqeeyaan.
Talaabooyinka in ay tirtirto App Leyliga on iPhone:
Tallaabada 1. tuubada Double button Home ah si ay u muujiyaan aragtida kala duwan ee hawsha u barnaamijyadooda dhawaan isticmaalay.
Tallaabada 2. cirib kor ku qoran bogga ugu kasta oo app icon iyo bogga u libdhi doonaa, oo app icon la waayi doonaa. Jooji Chine ee ay samaynayaan sidan.
Waa maxay sababta qaar ka mid ah app walxood iPhone waa madow?
Jawaab: Qaar ka mid ah astaanta Chine waa madow ama sugaya, inta badan, sababtoo ah barnaamijyadooda kuwan waxaa u fudud in uu doorto. Haddii helid la ma uusan dhammayn ay sabab u tahay arrinta network ama waxaa jira qaar ka mid ah dhibaato xirmo rakibo, waa in aad sidoo kale ugu xidhmaan aad iPhone la Wi-Fi, u tag App Store in redownload barnaamijyadooda ama u tag Settings> General> Background App Refresh si ay u dami helid ee app kasta siday u kala horreeyaan.
Sida loo Delete App Data ka iPhone
Marka la isticmaalayo barnaamijyadooda qaar ka mid ah, xogta u Chine, kuwaas oo la ururiyey iyo aad u badan in aad ku buuxisid aad iPhone adag disk. Si aad lacag la'aan ah ilaa aad iPhone, waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka hoose si aad u tirtirto xogta App on iPhone:
Tallaabada 1. Download iyo rakibi iFunbox on your computer.
Tallaabada 2. Isku aad iPhone la your computer iyo iFunbox furan.
Tallaabada 3. Meel app aad rabto in aad tirtirto xogta hoos User Codsiyada. Riix ah "+" dhinaca bidix ee app oo guji Library. Markaas ka furmo suuqa dhinacaaga midig, waxaad ka arki kartaa gal ah sidii loo magacaabay Cache . Waxaa fur iyo tirtirto wax walba ku jira.
Xalka 1: Delete Apps on iPhone Gacanta
Tallaabada 1. Tubada mid ka mid ah barnaamijyadooda ku saabsan iPhone dhowr ilbiriqsi ilaa aad ka aragto oo dhan u oynayo ee Dalka Chine.
Tallaabada 2. tuubada "X" yar ee-geeska sare ee app ah. Marka fariin loogu tirka app this u muuqataa, guji Delete in ay tirtirto app ee ka iPhone.
Fiiro gaar ah: tani waa habka caadiga ah si ay u tirtirto barnaamijyadooda ka iPhone. In kastoo aad tirtirto, dhab ahaantii Chine, kuwaas oo weli ku jira meel aad iPhone. Waxaad isticmaali kartaa qalab kabashada ah si ay u soo kabsadaan ka iPhone. Si aad u tirtirto iPhone si joogto ah Apps ka iPhone, akhri xal 2.
Dhib u takhalusid Apps ka iPhone
Su'aasha # 1: Marka aan hoos u qaban fartayda, oo isku dayaya in ay tirtirto barnaamijyadooda ku iPhone 4, waan arki kari maayo "x" qaar ka mid ah qaar ka mid ah barnaamijyadooda.
Jawaab: Marka hore, fadlan hubi barnaamijyadooda aad isku dayaya in ay tirtirto ka iPhone ma-lagu rakibay hore barnaamijyadooda, taas oo aan la tirtiri karaa xataa haddii aad isku daydo in ay soo celiso aad iPhone. Oo haddii ay ka tirsan tahay barnaamijyadooda jir aad soo bixi in aad iPhone, waa in aad ku sawirnaa Settings> General> Xadidaada, tirtiri ikhtiyaarka takhalusid Apps in ON. Oo markaas dabadeedna soo noqda in aad shaashadda guriga iPhone, mid app ilaa barnaamijyadooda kale gariir ka jaftaa. Guji "x" in ay tirtirto barnaamijyadooda la rabin on iPhone.
Su'aasha # 2: Ka dib markii aan taabtay ee "x" in ay tirtirto barnaamijyadooda ku iPhone iyo hubiyaa amarka la tirtiro in fariinta, waxa ay u muuqataa waxba ma dhicin. Maxaa qalad ah? The barnaamijyadooda waxaan isku dayay in ay tirtirto jira oo dhan cirro gudcur ah, iyo xitaa kuma iyaga galino.
Jawaab: Haddii aad la sameeyaa takhalusid iyo waxba ma dhicin, waa in aad u tagto App Store oo isku day in redownload ee Chine isku mid ah. Halkii leh rakib, waxa laga yaabaa in u muuqdaan sida Open. Wax kasta oo ay tahay, waxa guji mar kale ku shuban barnaamijyadooda ku saabsan iPhone. Markaasay ka dib, waxaad samayn kartaa amarka la tirtiro mar kale in laga takhaluso barnaamijyadooda iPhone.
Su'aasha # 3: anigu waxaan isku dayayaan in ay lacag la'aan ah ilaa meel ka mid ah iyadoo la tirtirayo barnaamijyadooda qaar ka mid ah aad iPhone, laakiin takhalusid waa temporarily.I rabto inaad sii xogta app sababtoo ah i laga yaabo inay maalin maalmaha ka mid isticmaalaan. Maxaan sameeyaa?
Jawaab: Guud ahaan, marka aad tirtirto barnaamijyadooda ku saabsan iPhone, waxa kale oo aad ka saarto xogta app. Habka keliya ee lagu sii xogta app waa in ay gurmad aad iPhone in iCloud ka hor aad tirtirto barnaamijyadooda ka. Marka aad mar kale u baahan tahay xogta, soo celinta aad iPhone ka iCloud.
Xalka 2: Delete All Apps on iPhone joogto ah
Dadka qaarkood waxay sheegaan in ay tirtirto barnaamijyadooda ku iPhone sababta oo ah waxay u socdaan in ay u baddashaan phone cusub iyo iibiso jir iPhone, oo raba in ay ka fogaadaan dadka helitaanka helaan in ay barnaamijyadooda ka. Xaaladdan oo kale, waxaa laga yaabaa in aad jeceshahay in aad tirtirto oo dhan barnaamijyadooda iyo sidoo kale macluumaad kale oo ku saabsan iPhone si joogto ah. Haddii ay sidaas tahay, isku day inaad SafeEraser Wondershare . Waa aalad desktop in masixi wax kasta oo aad iPhone, oo ay ku jirto barnaamijyadooda. Iyo wax kasta oo aan la tirtirayaa mar dambe soo kabsaday karo.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi Wondershare SafeEraser on your computer Windows;
Tallaabada 2. Isku aad iPhone la your computer via cable USB ah oo aan bilowno SafeEraser Wondershare. Dooro mid ka mid ah 2 nooc oo ah tirtiro xogta: masixi dhammaan xogta ku saabsan qalab: masixi dhammaan macluumaadka iyo goobaha si joogto ah; masixi tirtiray faylasha: masixi oo kaliya, kuwaas oo alaabta aad tirtiray aad iPhone; Si aad u dooran noocan ah, fadlan marka hore isku day xal 1 in ay tirtirto barnaamijyadooda ka iPhone hore.
Tallaabada 3. Dooro mid ka mid ah heerarka ammaanka (gebi 3) in ay tirtirto barnaamijyadooda ku saabsan iPhone oo guji Start si ay u bilaabaan.
Sida loo Delete Newsstand
Dad badan ayaa ka caban in aysan tirtiri kartaa Newsstand. Taasi waa xaqiiqda ah. In kastoo aan ma tirtiri kartaa Newsstand, waxaan u meel shaashadda qarin karo, ugu yaraan ma in bogga koowaad. Tani waxay si aad u wanaagsan u isticmaala si ay u maareeyaan iPhone.
Tallaabada 1. Tubada mid app aad iPhone ilaa dhan u oynayo barnaamijyadooda.
Tallaabada 2. waxaa jiid ilaa Newsstand si ay u abuuraan gal ah; Waxaad magac in folder siin karaa.
Tallaabada 3. dib markii la abuurayo gal ah, waxaad jiidi karaan app loo baahan yahay ka soo baxay, oo kaliya Newsstand halkan. Markaas jiidi folder iyo ilaa dhankiisii ​​ka mid ah bog oo aad dhif u isticmaalaan.
Sida loo Delete VPN on iPhone
Sida ugu isticmaalay si ballaaran si ay u tirtirto VPN ka iPhone:
Tallaabada 1. Tubada Settings > General > VPN .
Tallaabada 2. Tubada icon yar VPN ah (macruufka 7) ka sokow, haddii aad iPhone waddaa in macruufka 6 ama hore, waa inay noqdaan arrow buluug ah.
Tallaabada 3. Daaqadda qaabeynta u VPN ah, waa in aad guji PPTP tab si ay u arkaan goobaha. Qeybta hoose, waxa aad ka arki kartaa Delete VPN doorasho. Waxaa Riix in ay tirtirto VPN ka iPhone.
Fiiro gaar ah: dadka qaar ayaa sheegaya in ka dib markii uninstalling avast, VPN soo jeestay off laftiisa Banaadir in ay hoos u ordaan baytari ah. Si loo xaliyo dhibaatada, waxaad tagi kartaa Settings> General> Profile ..., heli profile ee avast inaad ka saartid.
By sida aan sidoo kale ka heli qaar ka mid ah dadka la tirtiro VPN by dhejinta waaraadka Settings> General> Profile ... Kaadhkaaga ka badan VPN oo guji saar in ay tirtirto VPN ah. Siyaabaha kala duwan soo bandhigay inta badan, sababtoo ah goobaha ay u VPN yihiin. Dadka qaar ayaa isku dayay barnaamijyadooda dhinac saddexaad, halka qaar ka mid ah dadka ku dhow VPN gacanta.
Sida loo Delete cayn kasta oo Password on iPhone
Sida loo ka iPhone saar habayn
Tallaabada 1. Settings tuubada> General> Touch ID & habayn
Tallaabada 2. gala habayn ama aad iPhone a
Tani waa sida aad u tirtirto habayn ka iPhone haddii aad ogtahay habayn. Haddii aad illowdo habayn ama aad iPhone, waa in aad akhriyi sida loo furo aad iPhone ka dib waxaan halmaamay habayn .
Sida loo Delete Saved Safari Passwords on iPhone
Tallaabada 1. Settings tuubada, hoos si aad u hesho hormariyo Safari iyo dooran Auto Buuxi
Tallaabada 2. Tubada Clear All iyo xaqiijin tallaabada ay siyoodba AutoFill Cad Data.
Sida loo Delete iCloud Account on iPhone aan Password
Dadka qaarkood waxay leeyihiin iPhone la isticmaalay waxay ku iibsadeen waxa uu la xidhiidhaa account iCloud user hore ee. Si aad u tirtirto iCloud Account on iPhone aan password, laga yaabaa in aad isku dayi kartaa Settings tuubada this> General> celi> masixi All Content iyo Settings ama waxaad isku dayi kartaa SafeEraser Wondershare si ay u dejiyaan iPhone sida qalab cusub (users qorsheynaya in ay iska iibiso taleefanadooda iyagoo sidoo kale karaan isticmaali sidan in ay tirtirto dhammaan xogta ka iPhone si loo badbaadiyo macluumaadka gaarka ah).
Tallaabada 1. Ku rakib SafeEraser Wondershare
Download iyo rakibi SafeEraser Wondershare aad Windows PC. Hadda waxa ay si buuxda u la jaan qaada Windows 8.1 / 8/7 / XP / Vista. Connect aad iPhone la your computer via USB ah cable iPhone oo ay maamulaan SafeEraser Wondershare.
Tallaabada 2. Inaad doorato masixi qalab DHAMMAAN xogta
Riix masixi dhammaan xogta ku saabsan qalab. By xulashada, dhammaan xogta ku saabsan iPhone Waa in weligoodba la tirtirayaa, fursad uma iyaga mar kale soo kabsaday, xitaa marka la Wondershare Dr.Fone ee macruufka. In ay suuqa kala dooro LEVE, ee ka dooro mid ka mid ah 3 heerka ammaanka in ay masixi dhammaan xogta ku saabsan iPhone. Waxaa si xoog leh lagula talinayaa Heer Sare Ah.
Tallaabada 3. Delete dhammaan xogta ku iPhone
Guji ka Start button iyo xaqiijin talaabo si ay u masixi dhammaan xogta ku saabsan iPhone. Marka iPhone buuxda loo tirtiro, waxaad heli doontaa qalab cusub. U qotomiyey sidii qalab cusub oo ay soo bilaabay Lugood aad.
Sida loo Delete Xadidaada iPhone
Su'aasha # 1: sida loo damiyo Xadidaada u Helitaanka in App Kabcada_?
Jawaab: Xadidaada iPhone ayaa lagu wadaa in ay barnaamijyadooda ka tirtiray ilaaliyo. Si aad u tirtirto xanibaadaha, tuubada Settings> General> Xadidaada > Disable xadaysan oo ku qortaa erayga sirta ah ee xakamaynta.
Su'aasha # 2: halmaamay xayiraad habayn, maxaan sameeyaa?
Jawaab: haddii aad koobna qaar ka mid ah waxyaabaha ku saabsan iPhone iyo illoobin habayn xayiraad, ma waxaad tirtiri kartaa habayn xayiraad sida sida loo tirtiri habayn screen guriga , laakiin waa sida soo socota:
Tallaabada 1. Tubada Settings> iCloud , in uu saxiixo iyo weerar dadban ku Mail, Xiriirada, Kalandarada, Xusuusin, Notes, iyo in ka badan si ay u ON si hagaagsan ay waxyaalahan u iCloud.
Tallaabada 2. Press iyo hay badhanka Power aad iPhone ilaa slider cas u muuqataa. Dami aad iPhone.
Tallaabada 3. Isku aad iPhone la computer via cable USB ah oo aan bilowno Lugood. Press iyo hay badhanka Home ilaa Lugood aad xusuusisaa in uu ogaado qalab hab-kabashada. Riix OK iyo Soo Celinta iPhone.
Tallaabada 4. Ka dib soo celinta aad iPhone, mana jiri doonaan macluumaadka ku saabsan iPhone. Ka dibna waxaad ku sawirnaa Settings> iCloud aad iPhone, saxiixato iyo waxyaabaha u hagaagsan aad synced in iCloud in tallaabo 1 aad iPhone, gaar ahaan xiriirka.
Sida loo Delete Mail on iPhone
Sida loo Delete xisaab Email on iPhone
Tallaabada 1. Settings tuubada> Mail, Xiriirada, Kalandarada
Tallaabada 2. Tubada account email in aad rabto in aad tirtirto ku iPhone oo ka jaftaa Delete Account hoose ka.
Sida loo Delete Email in mailkooda on iPhone
Tallaabada 1. Tubada Mail app icon aad iPhone si ay u arkaan dhamaan fariimaha email;
Tallaabada 2. Riix badhanka Edit ku geeska kore ee midigta.
Tallaabada 3. Check emails rabin by dhejinta waaraadka goobo yar oo ku saabsan dhinaca bidix ee horyaalka email oo guji dhaqaaq hoose. In ka-up pop, ka jaftaa Trash .
Tallaabada 4. noqo xagga daaqaddii ayuu hore u mail mailkooda halkaas oo dhan emails iyo bixidda tuubada boostada . Tubada account email, taas oo aad la tirtiro emails ee Tallaabada 3. tuubada Trash oo guji Edit . Hubi emails aad gelisay in qashinka bin. Tubada Delete hoose.
Fiiro gaar ah: ma jiraan wax "tirtirto oo dhan" Option, kiiskan, haddii aad ku socoto in ay tirtirto oo dhan ama badan emails (fariimo email) ka iPhone, waa in aad u samayn adigoo email kasta. Ka taxaddar, inkastoo emails waxyaalahan waxaa loo tirtiray ka iPhone, ay weli ka jiraan meel aad iPhone. Waxay la soo kabsaday karaa aalad, sida Wondershare Dr.Fone ee macruufka . Haddii aad ula kac ahayn tirtiray email on iPhone, isku day in aad soo kabsado la Dr.Fone Wondershare ee macruufka. Haddii aad rabto in aad tirtirto emails on iPhone si joogto ah, isku day SafeEraser Wondershare in masixi tirtiray faylasha.
Sida loo Delete looduubay oo iPhone
Tallaabada 1. Tubada app Phone ee iPhone Home shaashadda oo ka jaftaa farriinta codka;
Tallaabada 2. Kaadhkaaga ka badan fariin ka xaq u leeyahay inuu ka tagay si ay u muujin ka tirtirto button;
Tallaabada 3. Tubada badhanka Delete in ay tirtirto fariin farriinta codka ah.
Waxaa jira dad badan oo ka cabanaya in la tirtiro farriinta uu soo laabto on iPhone. Dhab ahaantii, ka dib markii aad gacanta iyaga tirtirto ka iPhone, ay weli ku saabsan iPhone laakiin aan la arki karin oo aad u soo kaban karto, kuwa fariimaha tirtiray farriinta . Habka keliya ee lagu tirtirto looduubay oo joogto ah waa in la helo qalab dhinac saddexaad ah caawimo, sida Wondershare SafeEraser . Hoos waxaa ku qoran talaabooyinka faahfaahsan
Tallaabada 1. farriinta codka fariimaha Delete gacanta
Tubada app Phone> farriinta. Weerar dadban ku badan farriin u tagay oo guji badhanka Delete karti on iPhone.
Tallaabada 2. Download Wondershare SafeEraser
Download, rakibi oo ay maamulaan Wondershare SafeEraser aad kombuutarka Windows. Connect aad iPhone la your computer via cable USB ah. Wondershare SafeEraser ogaan doonaa iPhone. Laga soo bilaabo halkan, waa in aad doorato masixi tirtiray Files.
Tallaabada 3. Dooro heerka ammaanka iyo iskaan iPhone
Dooro heerka ammaanka ah in ay tirtirto farriinta. Waxaa si xoog leh lagula talinayaa Heer Sare Ah. Ka dibna riix Start in baarista iPhone u tirtiray Voice Mail.
Tallaabada 4. weligiis Delete farriinta codka
Ka dib markii aad ka baareyso iPhone, Wondershare SafeEraser muujin doonaa dhammaan faylasha tirtiray aad iPhone. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay si ay u doortaan fariimaha farriinta. Riix Xaqiiji iyo xaqiijin talaabo si ay weligood u tirtirto ka iPhone.
Sida loo Delete Calendar on iPhone
Tallaabada 1. Calendar Daahfurka in aad shaashadda iPhone Home;
Tallaabada 2. Kalandarada Tubada hoose ee shaashadda ah
Tallaabada 3. Tubada macluumaad cas (i) Astaanta si xaq ah kalandarka
Tallaabada 4. In Calendar Edit uu furmo suuqa, hoos u dhaqaaq guji Delete Calendar
Sida loo Delete Voice cadaymaha on iPhone
Tallaabada 1. tuubada app Voice taariikhqorihii;
Tallaabada 2. Calaamadee dhamaan cadaymaha codka in aad rabto in aad tirtirto ah;
Tallaabada 3. Tubada fursad u tirtirto.
Tani waa habka caadiga ah si ay u tirtirto Voice cadaymaha on iPhone. Si kastaba ha ahaatee, dadka qaar u caban in ka dib markii lagu casriyeeyo macruufka, waxayna ka heleen addoon ka tirtiray Voice cadaymaha soo noqday mar kale. Tani waa caadi, sababta oo ah ka dib markii aad gacanta tirtirto Voice cadaymaha on iPhone, ay weli ku jira meel aan aad ka arki kartaa oo aad kara soo kabsado, kuwaas oo delete iPhone Voice Deymaha maqan . Haddii aad rabto in aad tirtirto Voice cadaymaha on iPhone si joogto ah (ma recoverable), waxaad isku daydaa inaad SafeErasser Wondershare inay weligood masixi ka iPhone.
Fiiro gaar ah: Waxaad kaloo isku dayi kartaa in hagaagsan Lugood aad iPhone by unchecking doorasho nidaameed Music in ay tirtirto Voice cadaymaha ka iPhone haddii cadaymaha Voice hore u yihiin in Lugood Library. Si kastaba ha ahaatee, waxa dhici kara in Voice cadaymaha aad tirtiray mar kale u iman doonaan inay aad iPhone.
Isku day SafeEraser Wondershare in ay tirtirto Voice cadaymaha joogto ah
Tallaabada 1. Delete Voice cadaymaha on iPhone Gacanta
Isku day inaad sidii caadiga ahayd in ay tirtirto Voice cadaymaha aad iPhone hore: jaftaa Voice Gudoomiyaha app> heli Voice cadaymaha iyo iyaga tirtirto ka iPhone.
Tallaabada 2. Ku rakib SafeEraser Wondershare
Hel SafeEraser Wondershare si loo soo dajiyo on your computer Windows. Connect aad iPhone la your computer via cable USB ah. Software ayaa lagu ogaan doonaa iPhone si toos ah. On uu furmo suuqa ugu weyn, guji masixi tirtiray faylasha
Tallaabada 3. Dooro heerka ammaanka in ay masixi tirtiray Voice cadaymaha
3 heerka ammaanka aad heli karto si ay u masixi ka iPhone tirtirto Voice cadaymaha si joogto ah. Waxaan soo jeedinaynaa in aad isku daydo heer sare. Ka dib ka dibna riix Start in baarista iPhone u tirtiray Voice Deymaha maqan.
Tallaabada 4. ka iPhone Delete Voice cadaymaha weligiis
Ka dib markii iskaanka ah, dhammaan faylasha tirtiray waxa lagu soo bandhigay in uu furmo suuqa ugu weyn. Voice cadaymaha waxaa lagu soo bandhigaa degaanka xogta gaarka ah, waxaa loo hubiyo guji Xaqiiji hoose. Xaqiiji tallaabo oo guji Start inuu iyaga ka dhaqaajiyo ka iPhone.
Talaabooyinka Sahlan ee Delete Notes on iPhone
Tallaabada 1. Riix app Ogow in iPhone Home daaha ah,
Tallaabada 2. Kaadhkaaga ka badan horyaalka note ka xaq u leeyahay inuu ka tagay si ay awood Delete;
Tallaabada 3. Tubada Delete inuu ka saaro qoraalka. (Ama aad ku sawirnaa note iyo furmo u content note, ka jaftaa bin qashinka.)
Su'aasha # 1: my iPhone tirtirto qoraalada aan si toos ah aan xitaa ma oga ilaa aan arkay ma qoraalada ku iPhone. Waa maxay sababtu?
Jawaab: haddii aad dareentid in aad qoraalada laga badiyay iPhone, ma aha iPhone iyaga si toos ah u tirtirto, laakiin waxaad u sameeyey. Ka feker in aad xisaab email laga saaro ka hor inta aadan qoraalada laga badiyay iPhone. Qoraalada oo dhan waxa ay la xiriiraan account mail aad. Marka aad tirtirto xisaab email, waxaa laga yaabaa inaad aad u tirtirto qoraalada. Laba siyaabood si aad u hesho qoraalada dib, mar kale Waxyeelo account mail aad on your iPhone iyo kabsado qoraalada tirtiray on iPhone .
Sidee ayaan Safari tirtirto Bookmark
Tallaabada 1. Daahfurka Safari on iPhone;
Tallaabada 2. Riix kitaabka icon yar ee badhanka;
Tallaabada 3. Guji Bookmark, dadban ee guud ahaan bookmark ka xaq u leeyahay inuu iska daayeen oo ka jaftaa fursad u tirtirto.
Sida loo Cad Safari History Browser on iPhone
Tallaabada 1. Daahfurka browser web on your iPhone;
Tallaabada 2. Riix kitaabka icon yar hoose ee shaashadda;
Tallaabada 3. Tubada History, ka dibna tubbada badhanka oo cad cad ee koonaha midig ..
Sida loo Delete Kukiyada ee Safari
Tallaabada 1. Click Settings> Safari;
Tallaabada 2. Scroll hoos, heli hormariyo Kukiyada oo cad iyo Data;
Tallaabada 3. Xaqiiji tallaabada adigoo gujinaya Kukiyada oo cad iyo Data.
Sida loo Delete Old macruufka File kaabta on Computer ah
Haddii aad aad qalab macruufka taageeray la Lugood, si toos ah aad u tirtiri kartaa gurmad ka Lugood,
Tallaabada 1. Daahfurka Lugood iyo guji menu doorashada. On Mac, waa hoos Lugood menu. On Windows PC, waa hoos Edit menu.
Tallaabada 2. Riix tab Devices. Laga soo bilaabo aagga hayaan Device, doortaan gurmad macruufka jir ah oo guji Delete kaabta si ay u bilaabaan Kabcada_.
Bides sidan, waxa kale oo aad u tegi kartaa folder halkaas oo hore macruufka gurmad file jiraan in ay tirtirto gurmad file.
Halkan waxaa ku qoran meesha u jir macruufka gurmad file kombiyuutarka:
Mac: ~ / Library / Codsiga Support / MobileSync / kaabta /
The "~" ka dhigan folder Home aad. Haddii aadan arki Library gal gurigaaga, qaban Xulashada iyo guji menu Go ah.
Windows XP: \_ Documents iyo Settings \_ (username) \_ Codsiga Data \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ kaabta \_
Windows Vista \_ 7 \_ 8: \_ Users \_ (username) \_ AppData \_ barqiyey \_ Apple Computer \_ MobileSync \_ kaabta \_
> Resource > iPhone > Sida loo Delete SMS, Photos, Apps, Options System on iPhone